साथीहरूसँग घडी 47
के मानिस macrocosm को माइक्रोकोस छ, सानो मा ब्रह्मांड? यदि त्यसो भए, ग्रहहरू र दृश्यात्मक ताराहरू उनको भित्र प्रतिनिधित्व गरिनुपर्दछ। तिनीहरू कहाँ छन्?
बिभिन्न समय र विभिन्न तरिकाहरूमा चिन्तकहरूले भने, ब्रह्माण्ड मानिसमा प्रतीक हो। रूपक वा वास्तवमा यो सत्य हुन सक्छ। यसको मतलब यो होइन कि ब्रह्माण्डमा औंलाहरू र औंलाहरू छन् र टाउकोमा भौहू र कपाल लगाउँदछन्, न त ब्रह्माण्ड मानव शरीरको वर्तमान आयामका अनुसार बनेको छ, तर यसको मतलब यो हो कि ब्रह्माण्डको कार्यहरू विशेषता र चित्रित हुन सक्छ। मानिसमा आफ्नो अ organs्ग र अंशहरू द्वारा। मानिसको शरीरमा अ space्गहरू ठाउँ भर्नको लागि बनेको छैन, तर सामान्य अर्थतन्त्रमा केही कार्यहरू गर्न र समग्रको जीवको कल्याण गर्न। उही फर्ममेन्टमा शरीरको बारेमा पनि हुन सक्छ।
आकाशका प्रकाशका किरणहरू र आकाशमा स्थिर चम्किने ओर्बाहरू मिडिया हुन् जसको माध्यमबाट विश्वव्यापी शक्तिहरू अन्तरिक्षको शरीरमा कार्य गर्दछन्, सार्वभौमिक कानूनको अनुसार र सम्पूर्ण कल्याण र अर्थव्यवस्थाको लागि। आन्तरिक अ organs्गहरू, जस्तै यौन अंगहरू, मिर्गौला, प्लीहा, अग्न्याशय, कलेजो, मुटु र फोक्सो, को पत्राचार हो र सात ग्रहहरु को एक सीधा सम्बन्ध छ भनिन्छ। त्यस्ता वैज्ञानिक र रहस्यवादीहरू जस्ता बोहेमे, प्यारासेलसस, भोन हेल्मन्ट, स्वीडेनबर्ग, अग्नि दार्शनिक र alकेमिस्टहरूले एक अर्कासँग मिल्दो अंग र ग्रहहरूको नाम राखेका छन्। तिनीहरू सबै एक समान पत्राचार गर्दैन, तर सहमत छ कि त्यहाँ एक पारस्परिक कार्य र अंगहरू र ग्रहहरू बीचको सम्बन्ध छ। पत्राचार छ भनेर सचेत भएपछि, विद्यार्थीले यदि जान्न चाहन्छ भने, सोच्नुहोस् र समाधान गर्नुपर्दछ जुन विशेष ग्रहहरूसँग अ organs्गहरू सम्बन्धित छन्, र तिनीहरू कसरी सम्बन्धित र सञ्चालन हुन्छन्। उसले यस विषयमा अर्को टेबलमा निर्भर हुन सक्दैन। पत्राचार को तालिका यो गर्नेको लागी सही हुन सक्छ; यो अर्कोको लागि सही नहुन सक्छ। विद्यार्थीले आफ्नो पत्राचार भेट्टाउनु पर्छ।
सोचविचार नगरी कसैलाई पनि कहिले थाहा हुँदैन कि कसरी सार्वभौमिक वस्तुहरू शरीरको व्यक्तिगत भागहरूसँग सम्बन्धित छ र उनीहरूको बारेमा अरूले जे भन्छन् पनि। विषय थाहा नभएसम्म सोच्न जारी राख्नु पर्छ। नक्षत्र, तारा समूहहरू, अन्तरिक्षमा निहारिकासँग मिल्दोजुल्दो कुरा, शरीरमा प्लेक्सस, स्नायु गl्ग्लिया, स्नायु क्रसिंगको रूपमा काम गर्दछ। शरीरमा यी क्लस्टर वा क्रसिंगहरूले प्रकाश, स्नायु आभा उत्सर्जित गर्छन्। स्वर्गमा यो ताराहरु को ज्योति को रूप मा, र अन्य नामहरु द्वारा बोलाईन्छ। यो खगोलविद्को लागि कत्ति राम्रो देखिन्छ र काल्पनिक देखिन्छ, तर यदि उसले आफ्नो शरीरमा सोचेको छ भने उसले स्नायु केन्द्रहरू र ती धाराहरूको प्रकृति पत्ता लगाउँदैन भने उसले आफ्नो खगोल विज्ञानको बारेमा सिद्धान्त परिवर्तन गर्दछ। ऊ स्वर्गका ताराहरू के हुन् भनेर जान्छ, र शरीरमा केन्द्रहरूको रूपमा ती पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छ।
सामान्यतया स्वास्थ्यले के हो? यदि यो मानिसको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक शक्तिको संतुलन हो, त्यसपछि सन्तुलन कसरी राखिएको छ?
स्वास्थ्य यसको संरचना र प्रकार्यमा शरीरको सम्पूर्णता र सामर्थ्य हो। स्वास्थ्य सामान्यतया कामको लागि शरीरको शल्यक्रिया हो जसको लागि यसको उद्देश्य हो, यसको कार्यको बाधा वा यसको अ of्गको क्षति बिना। स्वास्थ्यको परिणामको रूपमा शक्ति विकसित र कायम गरीन्छ। शक्ति स्वास्थ्य बाहेकको कुरा होईन, न स्वास्थ्यबाट स्वतन्त्र हो। स्वास्थ्य शक्ति वा उर्जाको संरक्षण, र शरीर र सम्पूर्ण शरीरको भाग बीचमा एक पारस्परिक कार्यको संरक्षण द्वारा संरक्षित रहन्छ। यो मानव शरीरको साथसाथै साधारण मानिस मानिसमा पनि दिमाग र आध्यात्मिक प्रकृतिमा लागू हुन्छ। त्यहाँ मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्य छ किनकि त्यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य छ। समग्रको स्वास्थ्य कायम हुन्छ जब संयोजनको प्रत्येक अंशले पूरैको भलाइको लागि काम गर्दछ। नियम सजिलैसँग बुझिन्छ तर पालना गर्न गाह्रो छ। स्वास्थ्य डिग्री हासिल गरी यसलाई कायम राखिन्छ कि एक व्यक्ति स्वास्थ्य प्राप्त गर्न को लागी उसले के राम्रो गर्छ, र यसलाई सुरक्षित राख्न को लागी राम्रो गर्छ के गर्छ।